Siyaasadda soo celinta - Popular Jewelry
Soo celinta (KELIYA KELIYA)
Si aad xaq ugu yeelatid soo noqoshada, sheygaagu waa inuu noqdaa mid aan la isticmaalin isla xaaladdiina aad ku heshay. Baakadaha asalka ah oo ay weheliyaan qaybo ka mid ah bogaadinnada (haddii ay khuseyso) sidoo kale waa in lagu daraa.
ounce soo celintaada waa la ogolaaday, soo celintaada waa la shaqeyn doonaa oo deynta ayaa si otomaatig ah loogu dabaqi doonaa habkaagii hore ee lacag bixinta. Fadlan u oggolow maalmo kooban oo ku saabsan soo celinta la yiri si ay u shaqeyso.
Waxaan bedeleynaa walxaha kaliya haddii ay cilladaysan yihiin ama waxyeelloobeen. Haddii aad u baahan tahay beddel sax ah, noogu soo dir emayl info@popular.jewelry una soo dir sheygaaga Wadada 255B New York, New York US 10013. Is-beddelada ma ku hoos jiraan 15% lacagta soo celinta.
Adiga ayaa mas'uul ka noqon doona kharashka rarka ee ku soo noqnoqda. Kharashka rarka ee waqtiga iibsiga lama soo celin karo (haddii boostada lagu kabayo iyada oo loo marayo ikhtiyaarkeena ikhtiyaariga ah ee bilaashka ah qiimahaan badanaa waa lagaa arki doonaa; macmiilka waxaa lagu wargalin doonaa dhimista kahor soo celinta.)
Haddii aan ku siino calaamadda maraakiibta, kharashka dhoofinta celinta ayaa laga goyn doonaa celintaada.
Haddii aad daabulayso shay ka qiimo badan $ 50 tixgeli adeegsiga adeeg maraakiib la raad raaci karo iyo caymiska iibsiga xirmadaada. Dammaanad kama qaadi karno inaan heleyno soo noqoshadaada. Waxaad na weydiisan kartaa inaan ku siino calaamadda caymiska la sheegay (kor ka eeg lacagaha laga jaro lacagta soo celintaada).